Indlu Esemaphandleni Enkulu - I-Airbnb
Indlu Esemaphandleni Enkulu
Le ndawo isemaphethelweni eBig Woods (igama lendawo) eBluff Country. Indawo ikumgama wokuba ungahamba ngeenyawo (iimayile eziyi-2) weWisel Creek kunye neSouthfork yoMlambo iRot (iimayile eziyi-1,5). Yindawo entle yokuloba, yokuzingela, ukunyuka intaba nokubukela iintaka. Kufuphi ne-Harmony (12M) kunye ne-Lantaesboro (12.5m) iindlela zebhayisekile, i-tubing/i-canoeing kunye ne-Niagara Cave view. Ikwayindawo entle yemidlalo yasebusika (ukutyibilika ekhephini, ukutyibilika ekhephini, ukutyibilika ekhephini kunye nokutyibilika ekhephini). Buza ngeemeko zekhephu.
Le ndawo ipholileyo nebukekayo enobomi obuninzi basendle yenza kube mnandi xa utyelela iindawo zabakhenkethi zasekuhlaleni. Kukho i-firepit ene-tripod grill kunye ne-grill yamalahle kule ndawo. Le yindawo entle yokumamela ukuzola njengoko ujonga iinkwenkwezi. Ebusika, umzila wokutyibilika ekhephini udlula kumva wee-acre zethu eziyi-36. Ngexesha lehlobo le ndlu inendawo yokungena imoto enendawo encinci yokukhempisha eyi-15.
4.97 · Izimvo eziyi-174
Le yindawo yasemaphandleni. Indlu esemaphandleni ibuyiselwe umva ukusuka kwindlela engummangaliso (malunga neemayile eziyi-3 ukusuka kwindlela enzima) kwindlela ende yokungena enamakhaya ayi-2 kunye nendlu yamaplanga ekufutshane nesiphelo sendlela yokungena eyenza indlu esemaphandleni ibe yeyakho wedwa kodwa ingabandakanyi. Indawo yokungena imoto yindawo yokukhempisha encinci, ethe cwaka ekude kakhulu kule ndlu.
Siyikhaya elilandelayo ukunyuka induli ukusuka kwindlu esemaphandleni kwaye siza kufumaneka xa kuyimfuneko.